Boqolaal maleeshiyaad towbadkeenayaal ah oo ka garab dagaalamayey ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka DF ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay isku soo dhiibay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Iyadoona maleeshiyaadkan lagu soo bandhigay meello k
Arintan ayaa ka dambeysay ka dib markii ciidamada Itoobiya ayaa dhawaan isaga baxeen magaallo dhowr ah oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya, ayna maleeshiyaadku beylah u noqdeen weerarada iyo baacsiga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
In badan oo ka mid ah maleeshiyaadkan ayaa doortay in ay qaataan baaqa Al-Shabaab, ayna isku soo dhiibaan mujaahidiinta si ay deegaanadooda ugu soo noqdaan, waxayna iska diideen in ay ciidamada Itoobiya dhulkooda u raacaan.
Degmooyinka Galcad, Moqakori, Halgan, Ceel-Cali iyo Tiyeegloow ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee lagu qaabilay maleeshiyaadka towbadkeenayaasha ah.
TV-ga Al-Jazeera ayaa dhawaan booqday degmada Galcad oo ka mid ah deeganada looga cararay maleeshiyaadka murtadiinta xilligii ciidamada Itoobiya ay ka baxayeen saldhigyadooda, waxaana ay la kulantay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii markii hore raacay ciidamada Itoobiya balse soo noqday iyagoo towbadkeenayaal ah.
Video kooban oo uu baahiyey TV-ga Al-Jazeera ayaa lagu sheegay in Soomaalidii ka garab dagaalameysay ciidamadii Itoobiya ee isaga baxay bartamaha soomaaliya ay hubkooda ku soo wareejinayaan Al-Shabaab si loo cafiyo, taas oo qeyb ka ah olole "hub cafis ku badalasho ah" oo lagu soo dhaweeyo maleeshiyaatka ka towbadkeenayaasha ah.
Ciidamada Itoobiya ayaa inta badan maleeshiyaad ka qorta deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Soomaaliya balse kaligood ayey kaga tagtaa masiirkooda marka ay ka baxeyso deegaanada qaar taas oo keeneysa in ay halis gasho nolosha dad badan oo markii hore heystay amaan iyo nabadgalyo balse ku dakanoobay la shaqeynta ciidamada Itoobiya.
Xarakada Al-Shabaab ayaa badanaa dadkaas u sameysa fursado ay dib ugu soo noqonayaan guryahooda sida ku cad muuqaalkan uu baahiyey TV-ga Al-jazeera, waxaana maleeshiyaadka ay isku furtaan hubkooda si loo cafiyo, ka dibna towbad ayaa loo qabtaa.